Uyilungisa kanjani i-eseyi yakho ebha... | Oxford isiZulu Living Dictionaries
Ikhaya Explore Uyilungisa kanjani i-eseyi yakho ebhalwe ngesiZulu?
Uyilungisa kanjani i-eseyi yakho ebhalwe ngesiZulu?
Ukulungisa kuyisinqumo sokugcina esibalulekile uma kade ubhala. Ukulungisa kubandakanya ukubheka i-eseyi yakho yonke. Kubandakanya ukuthi ugxile eminxeni ethile ukuze uqiniseke ukuthi i-eseyi inakho ukuxhumana futhi isikulungele ukuthi ihanjiswe ozoyimaka. Ukuxhumana akusebenzi endleleni obeka ngayo amaphuzu akho kuphela noma esizathwini se-eseyi, kuphinde kubheke iminxa yokubhala i-eseyi. Isibonelo, ukuqondisa kahle nokubalula imithombo oyisebenzisile. Ngakho ukulungisa kuwumsebezi omkhulu, uma ubheka zonke izinto okumele uzibheke kuyo i-eseyi ebhaliwe.
Amaphuzu okumele ugxile kuwona uma ulungisa
Funda i-eseyi uphimise. Uma kungazwakali kahle noma uma kukudina ukuyifunda ngokuphimisela, kuzomdina kakhulu ukuyifunda lowo ozoyimaka.
I-eseyi kumele ibe nesingeniso, umzimba nesiphetho. Lezi zahluko ezintathu ezivulelekile zingaba nezigatshana ezimbadlwana ngasinye. Kodwa i-eseyi kumele ibe nesingeniso esicacile bha kanye nesiphetho. Funda lezo zahluko kuqala. Kumele kube nokuxhumana okucacile. Esingenisweni kumele ube nesitatimende esicacile. Emva kwalokho kumele uchaze kafushane amaphuzu ozoxoxa ngawo kuyo i-eseyi. Esiphethweni kumele usisho isihloko kanye namaphuzu abalulekile engxoxo yakho. Bese usho amaphuzu okuvala. Umzimba we-eseyi uzobe unawo wonke amaphuzu/imibono ofisa ukuxoxa ngawo. Lokhu kumele kube nokuxhumana nesihloko. Ngesikhathi ulungisa qinisekisa ukuthi iphuzu/umbono ngamunye uhlobene nesihloko.
Funda imiyalelo ekhishwe umuntu ozoyihambisa kuyena i-eseyi. Ukuveza ukuthi izicaphuni uzithathephi nokulandela amasu ezindlela zokuveza imithombo onikezwe zona. Khumbula amamojuli noma izifundo ezahluke nezingasebenzisa amasu ahlukene.
Kujwayeleke ukuthi unikezwe ukuthi i-eseyi kumele ibe yinde kangakanani. Ungadluli kulokhu okunikeziwe. Qinisekisa ukuthi ukusebenzisa izihloko kanye nezihlokwana kugunyaziwe. Ungasebenzisi imibhalo eyi-italics kokunye futhi uphinde usebenzise imibhalo egqamile kokunye. Yiba nenhlalanjalo. Bheka izinamba zakho uma usebenzisa izinamba. Qinisekisa ukuthi ubungako bamagama bunenhlalanjalo.
Amagama ozowakhetha ukuwasebenzisa kanye nokuma kwemisho kuyingxenye ebalulekile ye-eseyi. Kuyasiza ukudlulisa ofisa ukukhuluma ngakho. Bheka ukuthi usebenzisa amagama afanele. Ngabe usebenzisa amagama angaziwa noma angajwayelekile? uOxfordDictionaries uchaza lokhu njengendlela engekho emthethweni yamagama ahlose ukuveza okuthilenoma isitatimende esizwakalayo esesenziwe. Kodwa-ke lapho kunokuxhumana okumbaxambili noma okumqondomningi, kwenza ukuthi umqondo othile uphikwe uma isitatimende sinenkinga noma singazwakali.
Isibonelo, ngabe usebenzisa amazwi asho ubuningi obungacacile emushweni njengokuthi “abantu abaningi bayakholwa”? noma usebenzisa impambosi yokwenziwa njengokuthi “kuthiwa”? noma usebenzisa izandiso njengokuthi “okubalulekile”? Uma wenza lokhu, kuyeke. Ukusebenzisa amagama angacacisi kanye nezitatimende ezingacacile kuzokwenza i-eseyi yakho ingazwakali.
Gwema ukuphindaphinda imibono namagama. Bheka iphuzu lesibili. Akubalulekile ukuthi chaza kafushane. Ukubeka obala yikona ukuchaza kafushane. Ngabe wenza okufanayo kuyo i-eseyi yakho? Susa amagama aphindekile.
Ngabe mide kangakanani imisho yakho? Uma umusho wakho umude kakhulu, umuntu ofundayo ulahlekelwa umqondo wofuna ukukusho. Ngabe zinde kangakanani izigatshana zakho? Isigaba eside asibukeki kahle, yize noma kuwumbono owodwa okuxoxwa ngawo, hlukanisa ngezigaba ezincane. Qinisekisa ukuthi umbono uba sesigabeni esisodwa.
Qinisekisa ukuthi isipelingi sakho silungile. Isipelingi esingalungile asivumelekile kuyo i-eseyi yezemfundo.
Njalo yisho ukuthi yimiphi imithombo oyisebenzisile emibonweni yakho. Uma uhluleka ukwenza lokho, lokhu kubizwa ngokukopela futhi kuwukuphula umthetho. Kumele ufake i-eseyi yakho ku-Turnitin noma ithuluzi elisebenza ngokufanayo ukuqinisekisa ukuthi awukopeli.